IFactory yesigri yetshokholethi, uMboneleli we-Chocolate grinder-LST Machine
I-Chocolate ginder sesona sixhobo sokuvelisa umgca wokuvelisa itshokolethi, ibandakanya umatshini we-Horizontal-Type Ball Mill kunye nomatshini wetshokolethi / iswekile yeconche, bonke aba matshini basetyenziselwa ukusulungekiswa kwento ekrwada.Iginder yetshokholethi sisiqalo somgca wemveliso wonke. ,Ngumcolisi wezinto eziluhlaza, oko kuthetha ukuba yonke inkqubo yokuvelisa itshokolethi idinga ukugaya izinto eziluhlaza, iyona nxalenye ephambili yomgca wemveliso yonke.i-chocolate grinder ibandakanya i-ball mill kunye ne-conche machine, zonke iinkcukacha ngolu hlobo lulandelayo:
Yintoni umatshini we-Horizontal-Type Ball Mill?
Horizontal-Type Ball Mill umatshini iphuhliswe ngokudibeneyo liqela labasebenzi bobugcisa ukusuka kwiinkampani ezahlukeneyo kwaye isebenzisa amacandelo akhethekileyo aqhutywe yi Chengdu amashishini zomkhosi-lwabantu.Kwangaxeshanye, iye yamkela izibonelelo ezininzi ezithe tyaba zebhola zokusila ezifana ne-BUHLER yaseJamani, iNaichi, kunye neLehman, kunye namanzi abandayo nashushu angaphakathi ajikeleza inkqubo yokulawula ubushushu.Izixhobo zombane zeDelta PLC kunye neSchneider low-voltage.Konke oku kwenza le ngqukuva yebhola ihlangabezane ngokupheleleyo nenqanaba eliphezulu lamazwe ngamazwe. Iswekile egayiweyo inokufakwa ngokuthe ngqo kwitanki yokuxuba kwaye ilungele inkqubo yokusila, Incasa ngakumbi kwiswekile egayiweyo egayiweyo, kwaye i-99.99% yokulunga inokufumana i-18-25 microns. emva kokuba i-milled.ball mill iphuculwe kunye neenzuzo zokusetyenziswa kwamandla aphantsi, imveliso ephezulu, ingxolo ephantsi, umxholo wesinyithi ophantsi kakhulu, kulula ukuyicoca, i-touch operation enye, njl. ixesha lokugaya kwaye ligcinwe amaxesha angama-4-6 okusetyenziswa kwamandla.Ngeteknoloji ehamba phambili ehamba phambili kunye nezixhobo ezithunyelwa ngaphandle kunye nokupakishwa kokuqala, ukusebenza kwezixhobo kunye nomgangatho weemveliso uqinisekisiwe.
Yintoni umatshini wetshokolethi yeconche?
Umatshini weconche yetshokholethi sisixhobo esisisiseko sokuvelisa iilekese zetshokholethi, sisetyenziselwa ukucolwa kwezinto zetshokholethi ekrwada, sisetyenziselwa ukucokisa izithako zetshokholethi/umxube webhotolo yekoko, umgubo wekoko, ubunzima bekoko, ibar yetshokolethi, iswekile egranulated, umgubo wobisi njl.
Iphuhliswa kuzwelonke kwaye sisisizukulwana esitsha sokusulungekisa itshokolethi yomatshini. Uyilo olukhethekileyo luqinisekisa ukusebenza lula, ukucocwa lula, ukusetyenziswa kwamandla aphantsi, ukusebenza kakuhle, inkangeleko entle (izinto ezingaphezulu zizinto zesipili, umphezulu ugutyungelwe yifilimu emhlophe. ukukhusela) njl.Inokuphucula ukuthungwa kokugqibela kunye nencasa yetshokolethi, sesona sixhobo siphambili sokuvelisa umgca wokuvelisa itshokolethi.
Yintoni inzuzo ye-chocolate grinder?
Umatshini wokusila webhola: unciphisa ingxolo, wonga amandla, uphucula ukusebenza kakuhle kwemveliso, ukuchaneka okucolekileyo kokusila;
Umatshini weconche yetshokholethi: kulula ukuyisebenzisa, ixabiso eliphantsi.
Injani inkqubo yokusebenza yomatshini wokungqusha weBhola?>
Umatshini wethu wokusila webhola ophambili ubandakanya: IYunithi engundoqo ye-Ball Mill, iTanki yokuxuba, iTanki yokuThutha, impompo yeSiraphu, iStrainer esinamandla seMagnetic, umatshini wokupholisa wamanzi, umatshini wobushushu bokufa kunye neMibhobho. , umthamo ngamnye yi-600L, sinokwenza ngokwezifiso umthengi ukuba umthamo wabo omncinci wokukhupha, uya kufuna kuphela iyunithi enye ephambili, izinto zomatshini yintsimbi engama-304.
Inkqubo yokusebenza komatshini wokusila: Layisha imathiriyeli ekrwada kwitanki yoMxubi → Ukunyibilika kunye nokuxuba → Ibhola yokuQala yokugalela → iTanki yokuHamba → iMila yeBhola yesiBini → Isihluzi esinamandla seMagnetic → Ngaphandle
Ngowuphi umatshini wokusila olungele iprojekthi yam?